Les Gîtes Havrais (Gîte Tellier) ***
Embindini weziko elidala laseLe Havre, phakathi kweHonfleur kunye ne-Etretat.
Ifulethi elikhanyayo, elitofotofo, elizolileyo kwaye libekwe kwindawo efanelekileyo (indawo ekufutshane nezithuthi, iivenkile, imidlalo kunye nemisebenzi yenkcubeko), inegadi encinci enefenitshala yegadi yokuphumla okanye yokutyela ngaphandle.
Ilinen yokulala kunye neetawuli zinikezelwe.
Ukufika kube lula enkosi kwisistim yebhokisi yesitshixo ekhuselekileyo (ukufika kade kunokwenzeka).
Ukwehliswa kwemithwalo nangaliphi na ixesha elinokwenzeka (igumbi elikhuselekileyo). Indawo yokugcina ibhayisekile.
Indawo yokuhlala yabakhenkethi enefenitshala ihlelwe ngeenkwenkwezi ezi-3.
Jonga egadini, uzolile.
Furniture, izitya, izixhobo zombane zasekhaya (ifriji, ukuhlamba umatshini, Isitovu segesi yodongwe, eziko, microwave, intsimbi kunye netafile, ikharakhtha, ikofu, uMenzi iprosesa ukutya ...), flat screen TV, amashiti, intercom, wifi nge ifayibha.
Ibhedi yomntwana kunye nesitulo esiphezulu zifumaneka simahla.
Maninzi amaxwebhu abakhenkethi akhoyo.
4.75 ·Izimvo eziyi-65
I-Le Havre kuphela kwesixeko esinezakhiwo zanamhlanje ezichazwe njengeSiza seLifa leMveli leHlabathi le-UNESCO kwiziko lesixeko saso (2005). Ibekwe ngokufanelekileyo phakathi kweHonfleur (imizuzu engama-30 enkosi kwiPont de Normandie) kunye ne-Etretat (imizuzu engama-45).
Uya kuhlala kumbindi weLe Havre, kwisithili saseSainte-Anne, esekwe embindini wenkulungwane ye-19, ekuphela kwesithili saseLe Havre esachatshazelwa kancinane kuphela ziibhombu zeAllied, kwaye usenezakhiwo ezininzi. phambi 1944 kwaye kakuhle ngobugcisa obukhulu, zibekwe lokuhlola umzi kwakhona yaso ngu Auguste Perret, abafikelela idolophu eliphezulu ngokuthatha ngomnye nobhazabhaza ezininzi yayaziwa le Havre.
16 min ukuhamba ukusuka eVauban Docks
Imizuzu emi-3 ngemoto ukusuka kwimodeli yokuhlala yasePerret
Imizuzu emi-3 ngemoto esuka eNotre Dame Cathedral
34 min ngemoto ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseDeauville.
Ndiyathembisa ukukwamkela njengabahlobo, ukuze ndikubonelele ngendawo yokuhlala etofotofo, ixhotyiswe kakuhle, icocekile kwaye izolile, ukwenza konke okusemandleni akho ukuququzelela ukuhlala kwakho kunye nokudityaniswa kwakho kwindawo ekungqongileyo, ukukugcinela ukwamkelwa ngokufudumeleyo.
Ndiyathembisa ukukwamkela njengabahlobo, ukuze ndikubonelele ngendawo yokuhlala etofotofo, ixhotyiswe kakuhle, icocekile kwaye izolile, ukwenza konke okusemandleni akho ukuququzele…
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R6854